कसरी एक होटल बुक गर्ने तपाई आफैंमा छ, छुट 20
कसरी बुट होट होटल मात्र
बुकिंग प्रणाली के हो
होटलहरूको खोजी इन्जिन के हो
किन होटललाई तपाईंको कार्ड डाटा
जो पूर्वव्यापी भन्दा बढि होटेलमा आउन सक्छ
nyla प्याकेस्प होटल: महान स्थान र समुद्री दृश्य
साइड होटल: आकाशगम र सस्तो
इन्टरनेट पहुँच। / LI>
बैंक कार्ड। म नक्सा बनाउन सिफारिस गर्दछु (लिंकमा 1 वर्षमा लिंकमा), जब तपाइँ प्रत्येक होटल बुक गर्नका लागि नि: शुल्क बीमा र क्यासेक 10% प्राप्त गर्नुहुन्छ। / LI>
ईमेल। बुकसिंग गर्दा उनको ठेगाना तोक्नु पर्छ जब बुक गर्दै, तपाईं एक पत्र पुष्टि र बुकिंग कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ। वा यो मेलमा बुकिंग प्रणालीमा व्यक्तिगत खाता दर्ता गर्न र भविष्यमा यसलाई प्रयोग गर्न सम्भव छ। / LI> << p> स्वतन्त्र यात्रा योजनाको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण चरण एक आवास बुकिंग हो। मलाई भन्नुहोस् कहाँ सुरु गर्ने र कसरी तपाईंको यात्राको लागि अनलाइन आवास बुलेट गर्ने, यो होटेल (होटल), र होस्टेल (अतिथि हाउस्ट) हो। अब त्यहाँ धेरै बुकरिंग प्रणालीहरू छन् (टाइप गर्नुहोस् बुकिंग, एजेक, आदि टाइप गर्नुहोस् (उदाहरणका लागि,) जहाँ तपाईं होटलहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
पहिलो Perhahk! सामान्यमा एक होटल खोज्नुहोस्, होटलको नाम प्रतिलिपि गर्नुहोस् र तपाईंलाई आवश्यक पर्ने मितिहरू खोज्ने मिति हेर्नको लागि खोजी विन्डो घुसाउनुहोस्। यसैले, यो छ कि त्यहाँ अन्य बुकिंग प्रणालीहरूमा यस होटलमा 10-20% छुट छ कि छैन भनेर।
<< p> र अब सबै कुराको बारेमा विस्तृत रूपमा। एक होटल बुक गर्न, तपाईंलाई केहि समय र तीन सरल चीजहरू चाहिन्छ जुन सबैसँग पहिले नै छ:
playing प्रणाली एक साइट / सेवा हो जुन तपाईं र होटेल बीचमा मध्यस्थ हो जुन तपाईंलाई एउटा कोठा बुक गर्न अनुमति दिन्छ। सबै होटेलहरूसँग आफ्नै वेबसाइटहरू र निर्मित बुक गर्दै विमानमा कुनै पनि छैन, तिनीहरूलाई प्रख्यात र परिचित बुकरिंग प्रणाली मार्फत काम गर्न सजिलो छैन। र ती होटलहरू समेत जुन उनीहरूको साइटहरूमा बुकिंग गर्दछ अझै सबैभन्दा लोकप्रिय बुकिंग प्रणालीहरूमा, र प्राय: तल्लो मूल्यमा प्रतिनिधित्व गरिन्छ, होटेल बजारमा प्रतिस्पर्धाको लागि।
कुनै पनि बुकिंग प्रणाली विश्वव्यापी होटेलको आधार हो, हजारौं विकल्पहरू समावेश गर्दछ। खोजीको क्रममा तपाईं विभिन्न मापदण्डमा होटलहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ - देश, शहर, मिति, केही विशिष्ट सेवाहरूको उपलब्धता। सबै होटलहरू तपाईं अघिल्लो पाहुनाहरू द्वारा समीक्षा पढ्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंको छनौट गर्न सजिलो बनाउनको लागि कन्सोडेटेड रेटिंग हेर्नुहोस्।
आरक्षण भुक्तान नम्बर बैंक कार्ड द्वारा गरिन्छ। तर त्यहाँ प्वाइमेन्ट बिना कोठा प्रस्ताव गर्दछ र आगमनको दिनमा ठाउँमा भुक्तान गर्दछ। एकै समयमा, तपाईंको बैंक कार्डको तथ्यांक अझै पनी वारेन्टीको लागि निर्दिष्ट गर्न सक्दछ।
बुक गर्दै, एक ईमेल भौचरको साथ आउँछ, जहाँ तपाईंको बुकिंग बुकसिंगको सबै डाटा र आरक्षण नम्बरहरू संकेत गरिन्छ। यदि तपाईं बुकिंग प्रणालीमा दर्ता हुनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत खातामा आरक्षण पनि देख्न सक्नुहुन्छ।
यो मलाई लाग्छ कि% 99 %% व्यक्तिले बुकिंग प्रयोग गर्छन्। ओम, यति सुनेको। जो अक्सर एशियालाई एशिदा जान्दछन्, किनभने सुरुमा यो पुस्तक एशियामा विशेष गरीएको छ। रूसी हेस्ट्रोभ तपाईं कोर्भामा तपाईको लागि उपयोगी हुनेछन, प्रतिबन्धका कारण, अन्य प्रणालीहरूले त्यहाँ काम गर्दैनन्।
धेरै होटेलहरू तुरून्त धेरै बुकरिंग प्रणालीहरूमा हुन्, तर मूल्यहरू फरक हुन्छन्। तसर्थ, धेरै साइटहरू हेर्नका लागि यो अनुभूति हुन्छ र तुलना गर्न सकिन्छ जहाँ मूल्य राम्रो छ। तर त्यहाँ धेरै सजिलो र छिटो एक तरीका छ -2क्लिकहरूमा। खोज इञ्जिन होटेलहरूको बारेमा भाषण।
होटल खोज ईन्जिन एक सेवा हो जहाँ तपाईं एकै समयमा सबै लोकप्रिय बुकिंग प्रणालीहरूमा होटलहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो त्यस्तो सेवा हो जसलाई तपाईंलाई चाहिएको होटलहरू खोज्दैछ, र बुनकिन, र वर्षौंमा, र टापुमा, र अन्य प्रणालीहरूमा। हात हातले यातना दिइनेछ। होटल खोज ईन्जिनहरू पनि एकत्रीकरणकर्ताहरू वा मेटापोस्कोभकोभभ पनि भनिन्छ।
यस लेखमा विभिन्न तरिकाहरूले होटलहरू बिना नैटेलहरू कसरी बुट गर्दछ कसरी विस्तार गर्न। होटेल प्रशासकहरूको लागि कारणहरूले तपाईंको क्रेडिट कार्डमा नगद रोक्न सक्दछ र कसरी यसलाई बचाउनबाट बच्न सकिन्छ वर्णन गरिएको छ। भुक्तानी र क्रेडिट कार्ड बिना होटल बुकशिटमा स्क्रिनशट्सको साथ चरण-कदम निर्देशनहरू छन्।
यदि यो विस्तृत लेख पूर्ण रूपमा पढ्न आवश्यक छैन भने, त्यसोभए तपाईं चाँडै इच्छित सेक्सनमा मेनूबाट जान सक्नुहुन्छ।
धेरै जसो केसहरूमा, होटलको बुकिंग पूरा गर्न अनलाइन प्रणाली तपाईंलाई बैंक कार्डमा जानकारी बनाउन आवश्यक छ। यदि पर्यटकले तुरुन्तै आवासको लागि एक पूर्वष्कृत बनाउने योजना बनाएको छ भने यो आश्चर्यजनक छैन। तर किन तपाईंलाई क्रेडिट कार्ड डाटा चाहिएको छ यदि तपाईंको होटल आरक्षण भुक्तान बिना हो?
तथ्य यो हो कि अबटेल स्थापनाक्षेत्रमा अबटिक स्थापना समाप्त हुने छैन। यो जानकारी होटलको कोठाको वर्णनमा अनलाइन प्रणाली वेबसाइटमा खोजी गर्न सकिन्छ। नियमको रूपमा, जरिवाना बिना तपाईं प्रति दिन आर्मरलाई अस्वीकार गर्न सक्नुहुनेछ वा तीनवटा आगमनमा। आरक्षणको समयमा, प्रिपेमेन्ट बिना होटलले होटेलको नीति अनुसार आरक्षण रद्द गर्ने सर्तहरू स्वीकार गर्यो।
बदले, होटेलसँग एक शत्रुको ग्यारेन्टी छ कि एक शत्रुको घटनामा पर्यटकले जरिवाना खर्च गर्नेछ। यो वारेन्टीलाई बैंक कार्ड (क्रेडिट वा डेबिट) पर्यटक राखेर प्राप्त गर्न सकिन्छ।
यदि तपाई आरक्षण मुद्दाहरूमा अझै बलियो हुनुहुन्न भने, म सामान्य लेख पढ्न प्राथमिकता दिन्छु :.
यो आश्चर्यजनक रूपमा सस्तो होटेलमा सौतेणणमेट स्क्वायमा अवस्थित छ, उही नाम मस्जिद (यो निलो मस्जिद हो)। केहि विन्डोजहरूले यसलाई बेवास्ता गर्छन् - सायद इस्तानबुलको मुख्य आकर्षण। आयमिया सोफिया, दरबार टोकपाफी, बेसिलिका ट्या tank ्क पनि, पैदल दूरी भित्र। कोठा सानो छ, तर आरामदायक, बाइजान्टिन शैलीमा चित्रण गरिएको। त्यहाँ रूसीभाषी कर्मचारीहरू छन्। छतमा - दृश्यहरू र मार्मारा समुद्रको उत्कृष्ट दृष्टिकोणको साथ एक अरे।
अर्को होटल सिधा स्तनपायीमेट स्क्वायरमा उत्कृष्ट मूल्य-गुणस्तरीय अनुपात संग अर्को होटल। खैर, यो सबवेयरको धेरै नजिक छ, तपाईं सीधा Aataturk एयरपोर्टबाट लिन सक्नुहुन्छ। यस होटलमा समीक्षा (रूसीमा सहित) - केवल सबैभन्दा सकारात्मक! शान्त, सुन्दर, आरामदायक - ईन्टानबुलमा आरामदायी रहनको लागि अरू के आवश्यक छ? त्यो कोठाबाट त्यो समुद्रको दृश्य हो, जुन पनि, बाटोले, धेरै कोठाबाट खुल्छ। र एकै समयमा - धेरै धेरै सस्तो। यद्यपि यस होटेलसँग विभिन्न पैसाको लागि कोठाका विभिन्न कोटीहरू छन्।
साइड होटल Astanbul को मुटुमा अर्को सस्तो होटेल हो, NAYLA प्याकेट होटेलको छेउमा। निलो मस्जिद - 30000 मिटरमा, सेन्ट सोफिया क्याथियोडल - 40000. हम, सुपरमार्केटको नजीक। कोठाहरू सफा र आरामदायक छन्, समीक्षाहरू सबैभन्दा सकारात्मक छन्। अवश्य पनि, र यस होटलमा अनुहार खोज्नु पर्ने कुरा छ, तर त्यस्ता पैसाको लागि यो केवल अभद्र हुने थियो।